Program | YUYU BEAUTY
You are at:Home»Category: "Program"
ခါးအဆီများလို့ လျှော့ချချင်တယ်…. Gym လည်းမသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် Yumie က ခါးလှည့်ကွင်းလေးအသုံးပြုပြီး လှည့်တဲ့နည်းလေးကို ပြပေးမယ်နော်။ ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
5 Minutes No Foundation
အချိန် (၅) မိနစ်လောက်ပဲပေးပြီး Foundation မသုံးပဲ လှလှလေးဖြစ်အောင် ပြင်ကြည့်မယ်နော်….ဒီးဒီက အခုပြင်ပြမှာဆိုတော့ ချစ်တို့လည်း ဒီးဒီနဲ့အတူတူ…
Make your foot Beautiful
မိန်းကလေးအများစု အလှအပနဲ့ပတ်သက်ရင် Skincare လုပ်တာတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ထိန်းသိမ်းတာတွေကို သတိတရလုပ်တတ်ကြပေမယ့် ခြေထောက်လေးတွေကို ဂရုတစိုက်သန့်စင်ဖို့တော့ မေ့တတ်ကြပါတယ်နော်။။…
Haruna try Myanmar Snacks….and then???
ဂျပန်မလေးတစ်ယောက် မြန်မာအစားအစာလေးတွေကို စားကြည့်တဲ့အခါ…. သူလေးတစ်ယောက် ဘာမုန့်လေးတွေကိုကြိုက်လဲ….နာမည်တွေကိုရော… သေချာခေါ်တတ်ရဲ့လား 😛 ကဲ…..ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…. ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
Homemade Lip Scrub, Lip Balm and Perfume
ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူလုပ်လို့ရမယ့် Beauty Product လေးတွေနဲ့ ပန်ဆုက မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်နော်။ ချစ်တို့တွေလည်း ကိုယ်တိုင်…
Reality & Expectation
ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားရင်း…. ရှုပ်ရင်း….ပွရင်း….တလွဲတွေနဲ့သာ Dolly လေးဟာ အခုလိုပဲ ဆက်ပြီး လွဲပြီးရင်း လွဲလာခဲ့ပါတယ်…… ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
အသားအရည်လေးကို တင်းတင်းကြည်ကြည်လေးဖြစ်အောင် သဘာဝကစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ အာလူးနဲ့ ထိန်းသိမ်းရအောင်…. အာလူးကိုယူပါမယ်။ နူးနေအောင်ပြုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်ပျားရည်လေးနဲ့ရောမွှေပြီး မျက်နှာမှာလိမ်းပေးနော်။ ၁၅…
ပျားရည်က ကျန်းမာရေးအတွက်သာမကပဲ အလှအတွက်လည်း အရမ်းကိုအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်နော်။ ပျားရည်တစ်ဇွန်းကိုယူပါ။ သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်းကိုယူပါ။ နှစ်ခုကိုရောမွှေပေးပါ။ လက်ကလေးမှာ Treatment သဘောနဲ့လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်…
အကြောပြတ်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးအများစုမှာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်.. အကြော်ပြတ်တယ်ဆိုတာဟာ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး!!! ဒီလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အကြောပြတ်ခြင်းတတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုမျိုး သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ ကာကွယ်မလဲဆိုတာ Dolly…
How to Remove Bad Smell?
မိန်းကလေးတွေအတွက် အလှအပလည်းအရေးကြီးသလို၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အားကစားလုပ်တက်တဲ့ညီမလေးတွေအတွက် အနံဆိုးတွေရန်မှကင်းဝေအောင်Treatmentလေးလုပ်ပြထားပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေက သံပုရာသီး၊ ဆား၊ သကြားနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။…